Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amawayini & Imimoya » I-Rum yi-Brain Food, Alcohol, ne-New York Lifestyle yakho
Culinary • Amasiko • Imfundo • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene • Amawayini & Imimoya
Ukuba rum ngomumo
Iramu lingabekwa eqenjini LOKUDLA, phela - lenziwa ngokuphelele ngezinto zomhlanga; ingahle ibhekwe njenge-dessert, ngoba imnandi. Kodwa-ke, kungumoya futhi kubekwe phakathi kweziphuzo ezidakayo ezinezinzuzo ezihlukile ezibandakanya izakhiwo ze-antibacterial, futhi kunconyelwe ukwelapha i-strep throat.
Amanye ama-rum anempilo kunamanye futhi, i-rum emnyama, ishiywe eminyakeni yobudala e-oki eshisiwe noma emiphongolweni yamapulangwe eyinikeza umbala omnyama nokunambitheka okugqamile, kubhekwa njengokuhlinzeka ngama-antioxidants anempilo.
Olunye ucwaningo lubonisa ukuthi i-rum inezimpahla ezingasiza ukuvikela amangqamuzana obuchopho.
Kunganciphisa nezingozi ezihambisana nokuwohloka komqondo kanye ne-Alzheimer's (David Friedman, Food Sanity: How to Eat in the World of Fads and Fiction).
I-rum yenziwa ngemikhiqizo eyenziwe ngomoba efana nama-molasses noma isiraphu yomoba. Ushukela ukhishwe waba utshwala obuketshezi ngamandla ahlukahlukene kanti utshwala ngokwevolumu (ABV) busuka kumaphesenti angama-40-80, buhambisa cishe ama-calories angama-97 nge-8 oz. isithombe esingu-80 (ngeCoke, engeza amanye ama-calories angu-88). Ikhwalithi ye-rum isuselwa ekwakhiweni kwama-molasses, ubude bokubila, uhlobo lwemigqomo esetshenzisiwe, nobude besikhathi esisetshenziselwa ukuguga emiphongolweni.
Ama-Rums ahlukaniswe ngombala (okungukuthi, omhlophe, omnyama / omnyama, wegolide, ovikela ngokweqile), ukunambitheka (okungukuthi, izinongo / ukunambitheka) nobudala. I-rum emnyama ineminyaka engu-2 + emigqonyeni ye-oki eshisiwe ekhulisa umbala omnyama / onsundu (ayihluziwe kulandela inqubo yokuguga). Igolide noma i-amber rum igugile emigqonyeni ye-oki eshisiwe isikhathi esifushane (izinyanga eziyi-18). IKarmeli ingangezwa ngemuva kwenqubo yokuguga ukunikeza umbala ocacile wegolide. I-rum emhlophe (eyaziwa ngokuthi isiliva, ukukhanya noma okucacile) imvamisa igcinwa ezitsheni zensimbi engagqwali noma emabhokisini futhi ineminyaka engu-1-2 inesihlungi samalahle asetshenziselwa ukukhipha noma imuphi umbala nokungcola ngemuva kwenqubo yokuguga futhi inokunambitheka okulula kune ama-amber noma ama-rums amnyama futhi kuvame ukutholakala kuma-cocktails kunokuba kudliwe kucocekile. I-rum enezinongo ifakwa phakathi nesigaba sokuxuba nesinamoni, i-aniseed, i-ginger, i-rosemary noma i-pepper ekugxileni kuze kufike kumaphesenti angu-2.5. I-rum enezinongo ivame ukuba mnyama ngombala noshukela noma i-caramel ngezikhathi ezithile engezwa ngobumnandi.
Iramu elixhunyaniswe nobugqila, ukuhlubuka nokugula
Ngenkathi i-rum imnandi futhi ivusa amaphathi ne-barbeque, isiphuzo sinendaba emnyama kakhulu emuva. Umlando uhlobanisa i-rum (lapho yafakwa emasimini omoba ngekhulu le-17) nomkhuba wobugqila lapho abantu babephoqeleka ukuba balime futhi basike umoba ngaphansi kwezimo ezimbi. Abasebenzi babephoqeleka ukuba basebenze ngokungakhathali ukuvutshelwa baphinde bachithe ama-molasses ukwenza i-rum eyayisetshenziswa njengemali yokuthenga izigqila eziningi.
Ekuqaleni (nangamakhulu eminyaka ambalwa), ikhwalithi yomkhiqizo ibithathwa njengengampofu futhi engabizi, ngokuyinhloko idliwa yizigqila zokutshala umoba futhi ihlotshaniswa namaqembu ezenhlalo nezomnotho aphansi. URum naye wadlala indima ebalulekile emlandweni wamasosha owaba khona e-Australia, iRum Rebellion (1808), lapho uMbusi uWilliam Bligh eketulwa ngokwengxenye ngenxa yemizamo yakhe yokuqeda ukusetshenziswa kweramu njengendlela yokukhokha.
Ukuhweba ngezigqila eTrans-Atlantic kwaphela ngekhulu le-19, noma kunjalo, ubugqila besimanje buyaqhubeka (okusho ukuthi, izimboni zezolimo nezendwangu zinikezela ngamaketanga). UMnyango Wezabasebenzi waseMelika uthola ukuthi ukuqashwa kwezingane kudlangile ekukhiqizeni umoba emazweni angu-18. Kwamanye amapulazi, abasebenzi basika umoba ngesandla ngaphansi kokushisa okukhulu okudala izingozi zezempilo. Ucwaningo luthola ukuthi ukucindezela kokushisa kungaholela ekwakhekeni kwesifo sezinso esingalapheki futhi esivame ukubulala.
Isibikezelo Semininingwane Yezimakethe sithola ukuthi imakethe ye-rum yomhlaba ilinganiselwa kuma-US $ 25 billion (2020) futhi kubikezelwe ukuthi izokhula ibe yi-US $ 21.5 billion ngonyaka ka-2025. yamaphesenti angu-15.8 pa esikhathini seminyaka emi-2020 (7.0-5) njengoba kunesidingo esikhulayo somhlaba wonke semikhiqizo yomoya ephezulu esezingeni eliphakeme neyokunethezeka ngokugxila ebuhlotsheni nemikhiqizo eyaziwayo.
I-USA ingumthengi omkhulu kunabo bonke nge-rum enezigidi ezingama-US $ 2435 million ezenziwe kwimali engenayo (2020) kanti amanani okuthengisa alandela isibili kuphela ku-vodka ne-whisky esigabeni semimoya. Abakhiqizi abakhulu be-rum amazwe aseLatin America naseCaribbean; kodwa-ke, i-USA inezinto eziningi zokuqala kulesi sigaba kanye nasePhilippines, India, Brazil, Fiji nase-Australia. I-Euromonitor International ithola ukuthi i-India ihola phambili emakethe yama-rum emhlabeni jikelele.
Izinguquko / izinselelo zeRum
Isigaba se-rum esisha sibuswa yiminyaka eyizinkulungwane (abantu abazalwa phakathi kuka-1981 no-1994/6) njengoba i-rum isiphuzo esingabizi kakhulu uma kuqhathaniswa neminye imimoya. Le makethe eqondiwe inamandla okusebenzisa futhi ikhombisa ukwazisa ngotshwala ngokuthanda i-rum (ngaphezu kwezinye iziphuzo ezidakayo). Umhlaba uphoqa i-rum ukuthi iguquke njengoba abathengi befuna imikhiqizo enoshukela owehlisiwe, ozinzile, kanye namazinga we-premium. Abakhiqizi bama-rum baye baletha imikhiqizo emisha yama-rum ezimakethe ngokuhlangenwe nakho kokunambitheka okugxile kokunambitheka okunikeza okumnandi, ubhotela, i-caramel, izithelo ezishisayo, namanothi e-vanilla avame ukuphela nge-smokey licorice kanye nama-molasses.
Kungenzeka kungabi ulwazi olujwayelekile, kepha kukhiqizwa ama-rum amaningi amazwe aseCaribbean ABAZIKHAMI umoba wabo futhi empeleni bangenise umoba ongahluziwe, ujusi kamoba noma ama-molasses njengesisekelo sabo kanye nokungeniswa kwempahla kudala izinselelo ezintsha kulezi zizwe eziyiziqhingi.
1. IMolasses, umkhiqizo ovela ekukhiqizeni ushukela ushibhile kunalokho usebenzisa umoba omsulwa ekukhiqizeni i-rum; kodwa-ke, njengoba isidingo soshukela sincipha, ukukhiqizwa kukashukela kuyancipha ngakho-ke kune-molasses encane etholakalayo yokuthumela ngaphandle. Ukuncipha kwesidingo kuphinde kwehlise intengo yomoba futhi lokhu kuyabakhathaza abakhiqizi bama-rum ukuze bathole ama-molasses banganyamalala ngokuphelele njengoba abalimi belahla umoba ukuze bathole imikhiqizo yezolimo enenzuzo ethe xaxa. Kukhona nokuthi kungenzeka ukuthi ukuthambekela kokuphila kahle kuzokhuthaza ohulumeni noma ezinye izinhlaka ezilawulayo ukuthi zibeke imikhawulo yokuqukethwe ushukela ethinta ukutholakala kukashukela nezindleko zomkhiqizo ophelile.
2. Izinqubo zokukhiqiza ezisimeme zibalulekile kubathengi beziphuzo ezintsha njengoba bekhathazekile ukwanelisa izidingo / izidingo zabo ngokushesha ngaphandle kokubeka engcupheni ikusasa. Ukukhiqizwa kweramu kunedumela lokukhiqiza umthelela omkhulu wezemvelo ngenxa yesidingo somhlaba sokukhulisa umoba, uphethiloli wafuna ukudala ukushisa ukuguqula umoba ongahluziwe ube yindawo yokuvuthwa kanye nenani lamanzi asetshenzisiwe ekukhiqizeni kanye nezinsizakusetshenziswa ukupakisha. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokusimama, imboni kufanele ibheke izindlela ezintsha zokuphathwa kwezinsizakusebenza kanye / noma zokongiwa kwayo futhi yenze amaphakethe angaboliseka kalula noma abambe imvelo.
Izinkampani ezimisele futhi ezikwazi ukuhamba ibanga, futhi zibhekane nezidingo zamanje, kunezindaba ezimnandi njengoba abathengi bezimisele ukukhokha amanani entengo ephrimiyamu yemikhiqizo emisha nge-super-premium nangaphezulu ngezigaba. IGolden Rum kulindeleke ukuthi ibe umkhuba omkhulu olandelayo emkhakheni wemimoya, lapho kulindeleke ukuthi ukuthengisa kukhuphuke ngamaphesenti angama-33 ngo-2021. Kuleli zinga lokukhula, izodlula igin ngo-2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
AbaseNew York bamukela iRum
KumaRum Congress aseManhattan asanda kwenziwa, uFederico J. Hernandez noTheRumLab bahlele uhlelo oluthokozisayo nolufundisayo ngokuhambisana nokunambitheka komuntu uqobo kwama-rums aphesheya ayejatshulelwa ngamakhulu ama-rum abangane nabalandeli. Ama-rums amasha ahlinzeka ngokuhlangenwe nakho kwezinzwa okuhlangabezana futhi okuvame ukudlula okulindelwe.
U-Will Hoekenga, i-ARRO American Rum Report.com
Intando Groves, Maggies Farm Rum. I-Pittsburg, PA
UKaren Hoskin, iMontanya Distillers, uCrested Butte, CO
I-Otto Flores, iBarcelo Rums, eDominican Republic
I-Waluco Maheia, iCopalli Rums, iPunta Gorda, iBelize
U-Ian Williams, Umbhali, iRum: Umlando Wezenhlalo Nobudlelwano Womoya Ongokoqobo ka-1776
Umkhosi wamaRum olandelayo uhlelelwe uSepthemba 2021, eSan Francisco, CA. Ngeminye imininingwane: californiarumfestival.com
UKathy Fish uthi:
Septemba 5, 2021 ku-13: 56
Kuzwakala njengokukhetha okuhle kimi!